Phupha ngeTikiti lokungeniswa Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neTikiti yolwamkelo
Ukuba sifuna ukutyelela iminyhadala, imidlalo yeqonga, iikhonsathi okanye imithendeleko, sidla ngokufuna itikiti. Ungafikelela kuphela ekusebenzeni ngokufanelekileyo ngetikiti elichanekileyo. Amaxabiso ala makhadi ahluka kakhulu. Kweminye imicimbi kuya kufuneka uhlawule i-euro ezimbalwa zokungena. Kwezinye iikhonsathi ezintle okanye iimveliso, kunokucelwa inani elinamalungu amathathu. Umvuzo uhlala ungalibaleki.
Itikiti alibalulekanga kubomi bokwenyani, kuba lisinika ukufikelela kwinto ethile. Ngamanye amaxesha kubonakala kwinqanaba elipheleleyo, okt amaphupha ethu. Ukuba sinetikiti esandleni okanye sithenge itikiti, phantse oku kuhlala kunentsingiselo yokomfuziselo. Ke ngoku ulichaza njani ityala njengephupha?
1 Uphawu lwephupha «itikiti lokungena» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «itikiti lokungena» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «itikiti lokungena» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itikiti lokungena» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ubambe itikiti kwintsebenzo yegcisa omthandayo, oku kunokuba ngumbonakaliso womnqweno. Uya kuthanda ukubona umntu ephila.
Kwiimeko ezininzi, nangona kunjalo, kukho okungakumbi kumaphupha ephawu "lwetikiti". Ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha, umfanekiso wephupha unokuba luphawu lokuba iingcango zivulelwe umntu oleleyo. Kuyahluka Amathuba anikezelweyo. Ngokusebenzisa la mathuba, unokufumana impumelelo enkulu. Umzamo wakho uya kuhlawula.
Xa utolika uphawu lwephupha 'lokwamkelwa', kunokuba luncedo ukuqaphela ukuba leliphi kanye kanye itikiti elinikezela ukufikelela kulo. Ukuba imeko yamaphupha yitikiti lomdlalo, mhlawumbi kuya kufuneka uzame ukumisela indlela oziphethe ngayo. Eyona njongo yeembono phandle ukujonga. Amatikiti emidlalo ayalumkisa ngemiphumo emibi Impixano. Kungcono ukuhlala ungavisisani nabanye, ngakumbi.
Nangona kunjalo, ukuba unetikiti lekonsathi ngesandla, rhoxisa Utshintsho phakathi. Kwiimeko ezinjalo zamaphupha, ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ngamanye amaxesha kukwabona uphawu lweendaba ezilungileyo.
Uphawu lwephupha «itikiti lokungena» - ukutolikwa kwengqondo
Kwingcaciso yengqondo yamaphupha, itikiti lokwamkelwa luluncedo umntu alale ngalo Ukufikelela iza engqondweni yakho. Uphawu lwephupha kufuneka lukucele ukuba ujonge ubuntu bakho. Oku kubandakanya ukwenziwa kwamava, iimvakalelo, kunye nezimo zengqondo. Ukuba ukuphinda usamkele isicelo se-subconscious yakho, ungagqibela iziko elingaphakathi fumana kwaye uphuhle kakuhle.
Ngokuya kohlalutyo lwengqondo lwamaphupha, enye into inokusetyenziswa ukuba igama lakho likwitikiti lamaphupha hayi elomculi owaziwayo. Kwimeko enjalo yokuphupha, umfanekiso wephupha ufuzisela owakho Ukuzithemba.
Ixabiso elibonisiweyo linquma: Ngaba uyaziqhenya ngezakhono zakho kwaye uyazi ukubaluleka kwakho? Okanye ngaba uhlala ukhula ngakumbi kunokuba unjalo, uzithengise kwaye uthengise iinkonzo zakho ezingaphantsi kwexabiso?
Uphawu lwephupha «itikiti lokungena» - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokomoya yokutolika, itikiti lifanekisela amava. Ngale nto, ukuphupha kuzuza ukufikelela kulwazi olutsha.